Ukuqhabula ubhiya ngosuku kungasindisa impilo yakho | News24
Ukuqhabula ubhiya ngosuku kungasindisa impilo yakho
Durban - Ukuqhabula ubhiya ngosuku kungasiza ukwehlisa izinga lokuba sengcupheni yokuthola isifo sohlangothi kanye nokuthola izifo zenhliziyo.
Lokhu kuvezwe ucwaningo lapho kutholakale ukuthi abantu abangu-80 000 abadala abanezinga elifanalekile le-cholesterol bangabantu abaphuza ubhiya ngokujwayelekile.
Imiphumela yalolu cwaningo ibonisa ukuthi ukuphuza ingilasi eyodwa noma ezimbili zotshwala ngosuku, liyehla izinga le-cholesterol kowesifazane noma owesimame kunalabo abangaphuzi noma labo abaphuza ngokweqile.
OLUNYE UDABA:Ucasuke wafuna ukuqhumisa ibhomu ngoba kuchitheke ubhiya wakhe
Yize lolu cwaningo lwenziwe ngobhiya kanye nogologo, imiphumela ibonakale kakhulu kwabaphuza ubhiya, kubika iTimeslive.
Uhulumeni wase-UK usephakamise ukuthi abantu besilisa kanye nabesimame bangaphuzi ngaphezu kwamayunithi angu-14 abhiya ngesonto.
Lolu cwaningo lwethulwe kwabe-US Heart Association, lapho kubonakale khona ukuthi ukuphuza ngokujwayelekile kwehlisa izinga eliphezulu le-cholesterol kubani abaphuza kanye ngosuku kunalabo abaphuza ngokweqile
Daily Lotto: No jackpot prize from Thurday's draw 14 minutes ago Click here for the full list of lottery results